प्रचण्डलाई भेट्न जसपाका अध्यक्ष यादव लगायतका नेता पेरिसडाँडामा
काठमाडौं । बहुमतीय आधारमा सरकार गठनका लागि राष्टपतिले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा दलका नेताहरुबीचको भेटवार्ता र बैठक तीव्र रुपमा भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज दिनभर नेताहरुको ओहोरदोहोर चलेको छ । बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव बुढानीलकण्ठ
ओलीप्रति यादवको आक्रोसः देश महामारीले आक्रान्त बनेको बेला मन्दिर बनाउने अभियानमा लाग्ने !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले प्रदेशलाई संघको इकाइ भएको बताउने गरेको उल्लेख गर्दै यादवले ओली
ओलीलाई देखाउँदै उपेन्द्रले भने- ‘गणतन्त्र फेरि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ’
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गणतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा देखिएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थालेकाले प्राप्त
ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ : यादव
बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रेस मञ्च नेपालले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष
उपेन्द्र यादवको प्रश्न: ओलीसँगको सहकार्यले संघीयता बलियो हुन्छ ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद विघटनको विपक्षमा रहेका शक्तिहरु मिलेर मुुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई पार्टीले प्रतिगमन मानेको भन्दै
ओलीसित सत्ता सहकार्य नहुने संकेत, रेशम चौधरी रिहाई गर्न मात्र कार्यदल बनाइएको हो : यादव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नेकपा एमालेसित सत्ता सहकार्य नगर्ने संकेत गरेको छ । सिंहदरवारमा बसेको संसदीय दल बैठकपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै उनीसित
भेदभाव र असमानता अन्त्य नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ : अध्यक्ष यादव
जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा जारी भेद्भाव र असमानता अन्त्य नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहने बताएका छन् । जमिअत उलमाए नेपालद्वारा सोमबार जनकपुरमा आयोजित मुस्लिम समुदायको
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोज्नेविरुद्ध सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघद्वारा शनिबार